Tattoos Greyhound - Micnahooda iyo Taariikhda ay Tahay Inaad Ogaato | Tattoo
Ma jeceshahay eeyaha cawl? Haddii aad tahay qof aad u jecel xayawaannada, hubaal waad jeclaan doontaa dhammaantood iyadoon loo eegin noocooda, laakiin maanta waxaan u hibeyn doonnaa goobtan si aan u sawirno tattoos-greyhound. Sababtoo ah iyaguna waa mid kale oo ka mid ah nashqadahaas kuwaas oo si fiican u qalma fiiro gaar ah.
Kaliya maahan naqshadeynta lafteeda, laakiin wax kasta oo ay koobeyso, maxaa yeelay waxay xambaarsan tahay macno weyn waana inay tahay xayawaan ka soo muuqday dhaqamo kala duwan sidaas darteedna u yeeshay astaamo kala duwan. Ma rabtaa inaad ogaato waxa mid waliba astaan ​​u yahay?
1 Macnaha Tattoo Greyhound
2 Muhiimadda cirroodka taariikhda
3 Fikradaha Tattoo ee Greyhound
3.4 Midab madow
Macnaha Tattoo Greyhound
Badanaa waa wax iska caadi ah in tattoo sidan oo kale ah uu had iyo jeer yeesho wax ka badan hal macne. Sidaa darteed, waa inaan wada garanaa dhammaantood intaanan qaadin tallaabada aan ugu xiraneyno maqaarkayaga. In kasta oo ay waajib tahay in la yiraahdo mid kasta oo ka mid ah ayaa ku sixri doona. Maxay tattoos greyhound runti astaan ​​u yihiin?
Dhinaca kale, Waxaa la sheegaa inay ku xiran yihiin haybadda ama boqortooyada laakiin sidoo kale sida oo kale waxay astaan ​​u tahay awoodda. Ka mid ahaanshaha dhaqammo kala duwan oo dhammaantoodna leh door weyn, waxaa sidoo kale la sheegay in cawlku uu la mid yahay dhaqanka. Geesinimada iyo firfircoonidu sidoo kale way is barbar socdaan iyo waliba xariifnimada. Marka hadda waad ogtahay macnaha oo dhan ee noocan oo kale ah tattoo uu na siinayo. Shaki la'aan, dhammaantood, mar dambe looma baahna inuu isagu qaato faahfaahin kale maxaa yeelay wuxuu kaliya la taajiyaa kuwa ku hareeraysan.
Muhiimadda cirroodka taariikhda
Si loo fahmo wax yar oo kafiican dhamaan macnayaashaas aan soo sheegnay, sidoo kale ma xuma in laga hadlo marinka cirroodka taariikhda iyo dhaqamada kala duwan. Laga bilaabo waqtiyadii Masaarida, waa in la sheegaa inay ka mid ahaayeen xayawaanada ugu jecel, sidaas darteed, markii fircoonnadu dhinteen waxaa lala aasi jiray iyaga. Sawirro ayaa laga helay qabuuraha greyhounds, taas oo ka dhigtay muhiimadooda mid cad.
Dhaqanka Griigga sidoo kale wuxuu umuuqday inay jiraan xayawaan la mid ah. Waqtiyada qaarkood, waxaa loo wada arkaayey ilaahyada ama ilaahyada dabiiciga sida ku dhacday Hecate. Halka ilaahyadii Roomaanku sidoo kale sidaas oo kale ayey sameeyeen oo ay garab socdeen cirroodyadii, oo matalayay ilaalintaas iyo geesinimo. Sanadihii la soo dhaafay, waa run inay haysteen waqtiyo hoos u dhac ah, halkaas oo ay ugu dhowaayeen inay ku baaba'aan cudurrada faafa iyo dagaallada awgood. In kasta oo sida aan ognahay, aysan ahayn sidaas oo kale waxaana la siiyay astaan ​​ah inay yihiin shirkad wanaagsan iyo saaxiib aamin ah.
Fikradaha Tattoo ee Greyhound
Waa run wajiyada had iyo jeer waa mid ka mid ah fikradaha waa weyn marka aan dooneyno inaan sameyno a Tattoo ee xayawaannadayada, tusaale ahaan. Sidaa darteed, waa inaan doorannaa sawir wanaagsan, si ay macquul u noqoto. Keliya muujinta, waxaan horeyba uheysan doonnaa xusuus qurxoon maqaarkayaga.
El tattoo greyhound minimalist had iyo jeer waa muujinta weyn, inaynaan meel iska dhigi karin. Kaliya maahan sababtoo ah waxaan ku xiran karnaa cabir hoos udhacay, laakiin maxaa yeelay waxay caadi ahaan ku tusaysaa khadad yar yar oo ganaax ah oo sameeya naqshadda eyga su'aasha laga qabo, ordaya ama fadhiya. Shaki la'aan, waxay u muuqan doontaa mid kufiican gacmaha ama hore.
Ma iloobi karno in markaan raadineyno tusaalooyinka tattoos greyhound, aan marwalba helno fikradaha qaar ka mid ah xayawaankan boodaya. Sababtoo ah, sidaan horay u shaacinnay, firfircoonida iyo xawaaraha ayaa ah labada astaamood ee ugu caansan. Sidaa awgeed, waxay sidoo kale noqon kartaa mid ka mid ah xulashooyinkaaga ugu fiican.
Miisaanka cirka ama khad madow ayaa ah xulashada ugu caansan markay tahay kahadalka noocyada noocan ah. In kasta oo sidaad ogtahay, aad marwalba siin karto dhammaystirka aad doorbidayso, maxaa yeelay tatuuyuhu had iyo jeer waa inuu u dhigmaa dhadhanka qofka xidhan. Fikraddan aan soo sheegnay, waxaan siin doonnaa qoto dheer iyo hoos gaar ah oo siyaadinaysa sumcad badan, haddii ay suurogal tahay.
Ku dhowaad dhammaan naqshadaha tattoo waxay aqbalaan qabyaaladda. Sababtoo ah waxay noqotay mid ka mid ah fikradaha waaweyn par heer sare oo sidan ah, cawlku kuma sii soconayo asalka. Faaligyo si buuxda loo aqoonsan karo oo ku jira khad madow oo aan kaaga tagi doonin danayn la'aan.
Hadda wax yar ayaad ka ogtahay macnaha iyo taariikhda greyhounds sannadihii la soo dhaafay. Miyaad ku heli laheyd tattoo iyaga iyaga ah?
Sawirada: @nutella_galgo, Pinterest
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Tattoos Xayawaan ah » Tattoo Greyhound
Micnaha taatoobida aqalka Iftiinka, iftiinka mugdiga